(12th.DEC.2011) face book ပေါ်မှ ကိုမင်းကိုနိုင်နှင့်နိုင်ငံကျဉ်းသားတို့အတွက်တောင်းဆိုမှုများ | ဒီရေ
(12th.DEC.2011) face book ပေါ်မှ ကိုမင်းကိုနိုင်နှင့်နိုင်ငံကျဉ်းသားတို့အတွက်တောင်းဆိုမှုများ
ငါတို့အဖိုးနဲ့အဖွားတောင်းဆိုနေတာလဲ .......... ယုံကြည့်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျသူတွေ အမြန်ဆုံးလွှတ်ဖို့ ။
ငါတို့ခမည်းတော်နဲ့မယ်တော်တောင်းဆိုနေတာလဲ ...... ယုံကြည့်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျသူတွေ အမြန်ဆုံးလွှတ်ဖို့။
ငါတို့ မျိုးဆက်တွေတောင်းဆိုနေတာလဲ ...... ယုံကြည့်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျသူတွေ
ငါတို့ ဦးရီးတော်နဲ့အရီးတွေတောင်းဆိုနေတာလဲ ...... ယုံကြည့်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျသူတွေ
ငါတို့ နောင်တော်နဲ့အမတော်တွေတောင်းဆိုနေတာလဲ ...... ယုံကြည့်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျသူတွေ အမြန်ဆုံးလွှတ်ဖို့။
ငါတို့ပြည်သူတွေတောင်းဆိုနေတာလဲ ...... ယုံကြည့်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျသူတွေ အမြန်ဆုံးလွှတ်ဖို့။
အုပ်ချုပ်သူလူကြီးမင်းများ နားလေးများကြားတယ်ဆိုရင် ...... ယုံကြည့်ချက်ကြောင့် ထောင်အသီးသီးမှ အကျဉ်းကျသူတွေကိုအမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးပါတော့။
Free Min Ko Naing and all political prisoners now
ကိုမင်းကိုနိုင်နှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကို အမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးပါ။
Free Min Ko Naing and Free all political prisoners in Burma!
အိုလောက...........ဘယ်အချိန်ထိများကလေးငယ်တယောက်လိုတစာစာငိုကြွေးပြီး ကိုမင်းကိုနိုင်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုလွှတ်ပေးပါတော့လို့ တောင်းဆိုနေရပါ့...
၀မ်းသာလိုက်တာဗျာ ကျနော်ရေးလိုက်တဲ့ ဆောင်းပါးကိုဖတ်ပြီး အဲဒီတုန်းက ကျနော်တို့ ဘိ်ုင်ပြတ်ရင် သွားသွားပြီး ဒုက္ခပေးတဲ့ အမတော်တယောက်ကို ပြန်တွေ့ရတယ်။ သူက ကျနော့်စာကိုဖတ်ပြီး လှမ်းရေးလိုက်တာ တချက်ထဲပဲ မင်းရေးတာတွေ ဖတ်ပြီး အဲဒီအကြောင်းရာတွေ အမအကုန်သိတယ် မင်းဘယ်သူလဲ ဆိုတာကို သိတယ် မင်းကိုငယ်ငယ်ကခေါ်တာ .............မဟုတ်လား ( ထိုအမတော်ခေါ်လိုက်သည့် အမည် အားလုံး သိလို့ မဖြစ်ဘူးးP ) သူက အဲဒီလိုရေးလိုက်တော့ ကျနော်လဲ လုံးဝကို မှတ်မိ ရပါတော့သည်။ အဲဒီအမလဲ ထောင်ကျသွားတာကိုး ဒါကြောင့်ပျောက်သွားတာ။ ၀မ်းသာတယ်ဗျာ ငယ်ငယ်က ကလေးအရွယ်ပြန်ရောက်ချင် သလိုပါပဲ အမတော်တွေနှင့် ပြန်ဆုံပြီဗျို့.......
ကိုပေါ်တို့နှင့်ပဲ ကျန်တော့တယ်... ကျနော်တို့ အကိုကြီး မင်းကိုနိုင် နှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ လွှတ်ပေးပါ သိန်းစိန်ရေ့ ........
ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကိုအရှိန်အဟုန်နဲ.ဆောင်ရွက်သွားရင်နိုင်ငံတကာရဲ.ပံ့ပိုးကူညီမှုတွေကို လည်းရလာမှာပါ။နိုင်ငံရေးအရလုံလောက်တဲ.တိုးတက်မှုကိုလုပ်ဆောင်နိုင်ရင်စီးပွားရေးအရ သိသာတဲ.အလားအလာကောင်းတွေလဲရလာမှာပါ။နိုင်ငံရေးတိုးတက်ပြောင်းလဲမှုအနေနဲ. ပြည်တွင်းစစ်တွေရပ်။ကိုမင်းကိုနိုင်နှင်.နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးချက်ခြင်းလွှတ်ပါ။
အပြစ်မရှိဘဲ မတရား အကျဉ်းကျခံနေကြရသူများဖြစ်သော ကိုမင်းကိုနိုင်နှင့်အတူ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအားလုံးကို အမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးပါ။
thailand 10:19 12 december 2011
အကို ကိုမင်းကိုနိုင် နှင့် တကွ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ အမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပါစေ။
< 12,dec,2011 08:26 am > Thailand.
Free Min Ko Naing Now...!
ဦးသိန်းစိန် နဲ.. ခင်ဗျားတို.တစ်တွေက အရမ်းရုပ်မာလွန်းနေပြီဗျာ..ခင် ဗျားတို.တစ်တွေ က မြတ်ဗုဒ္ဓ တောင်သြ၀ါဒပေးမရတဲ..သူတွေဖြစ်နေပြီ..မြတ်ဗုဒ္ဓသြ၀ါဒပေးမရတာ ခြောက်မျိုးရှိပါတယ်..(၁)မာနကြီးသောသူ၊(၂)အာကာတတရားကြီးမားသောသူ၊(၃)အာဏာရူးသောသူ၊(၄)အရူး၊(၅)ကလေး၊(၆)တိရစ္ဆာန်..အဲဒီ(၆) မျိုးထဲမှာ..ဦးသိန်းစိန် ခင်ဗျားက သုံးမျိုးပါဝင်ပါတယ်..အာာကာတ တရားကြီးမားတယ်၊အာဏာရူးတယ်၊တိရစ္ဆာန်လို.ကျင်.တယ်..ရဟန်းသံဃာတွေကိုသတ်တယ် ထောင်ထဲထည်.တယ်..သူများမိသားစုကို သေကွဲကွဲအောင်လဲလုပ်တယ်၊ရှင်ကွဲကွဲအောင်လဲလုပ်တယ်၊အဲဒါတွေက တိရစ္ဆာန်လို ကျင်.တာလေ..လူဆိုရင် အသိဥာဏ်ရှိတဲ.အတွက် အဲလိုလုပ်မှာမဟုတ်ဘူး..ဦးသိန်းစိန် ခင်ဗျားက ပုံပန်းသဏ္ဍန်ကသာ လူ..စိတ်နေစိတ်ထားက တိရစ္ဆာန်ဖြစ်နေတယ် ဒီတော.လူ.တိရစ္ဆာန်လို.ခေါ်ပါတယ်..ဒီတော.မြတ်ဗုဒ္ဒတောင်သြ၀ါဒပေးမရတဲ.ခြောက်မျိုးထဲမှာ..ခင်ဗျားတို.စစ်အစိုးရက လူ.တိရစ္ဆာန်တွေက ..သုံးမျိုးပါဝင်တယ်လေ..ဒီတော..လူလိုကျင်.မယ်ဆိုရင် ကိုမင်းကိုနိုင်နှင်.အကျဉ်းသားတွေကို အမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးပါ..ကိုမင်းကိုနိုင်နှင်.အကျဉ်းသားတွေကိုလွှတ်ပေးပြီးရင်..ကိုမင်းကိုနိုင်ဆီက လူလိုကျင်.နည်း၊လူလိုနေထိုင်နည်း၊လူလိုစဉ်းစားတွေးခေါ်နည်း၊လူ.ကျင်.၀တ်တွေက ဘာတွေလဲဆိုတာကို သင်ယူပါ..မှတ်သားပါ..လေ.လာပါ..ကိုမင်းကိုနိုင်က ခင်ဗျားတို.စစ်အစိုးရက ပဂ္ဂိုတွေကို သင်ပေးလိမ်.မယ်..အခမဲ.မဲ.သင်ပေးမှာပါ..ဘာလို.လဲဆိုတော..တိရစ္ဆာန်လို.ကျင်.နေတဲ. ခင်ဗျားတို.စစ်အစိုးရပုဂ္ဂိုတွေကို သင်ပေးရာဟာ ကိုမင်းကိုနိုင်အတွက် အရမ်းဘဲ မြင်.မြတ်ပါတယ်..တိရစ္ဆာန်စိတ်ကနေ..လူစိတ်ပေါက်သွားအောင်သင်ပေးရမှာမိုလို.ပါ..